Tratran’ny fitsaram-bahoaka… : notondrahan’ny olona asidra ny tarehin’ilay mpamaky trano | NewsMada
Tratran’ny fitsaram-bahoaka… : notondrahan’ny olona asidra ny tarehin’ilay mpamaky trano
Par Taratra sur 13/04/2018
Saika matin’ny fitsaram-bahoaka ireo jiolahy nifanenjehan’ny fokonolona teny Manarintsoa Isotry, ny talata hariva teo. Notondrahan’ny olona asidra ny lohany sy ny tarehin’ilay jiolahy…
Nidoboka am-ponja omaly eny amin’ny fonjan’Antanimora rehefa avy natolotra ny fampanoavana ireo andian-jiolahy miisa enina tompon’antoka tamin’ny fanafihana miharo vaky trano eny amin’ny faritra Manarintsoa Isotry sy Andranomanalina iny. Araka ny fanazavan’ny polisy, ireo telo lahy voalohany, tompon’antoka tamin’ny vaky trano teny Manarintsoa afovoany ka nahaverezana moto pompe miisa roa sy poste soudure iray, ny alahady vao maraimbe teo. Tsy tao an-trano ny tompon-trano tamin’io fotoana io ka maraina vao nahatsikaritra fa vaky ny tranony. Nametraka fitoriana avy hatrany teny amin’ny polisy ilay tompon-trano taorian’izay. Tratra niaraka tamin’izy ireo koa ny jiolahy mpandray ireo entana halatra. I Bolo sy i Beda no tompon’antoka tamin’io vaky trano io, raha ny fanazavana voaray hatrany. Nanao fikarohana avy hatrany ny polisy ka voasambotra ny talata teo teny Manarintsoa i Beda ary izy indray no nanoro ireo namany mpiara-manao asa ratsy aminy dia i Bolo.
Ny telo lahy faharoa kosa tratra ny asabotsy hifoha alahady teo teny Manarintsoa ihany noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona. Nifanenjehan’ny fokonolona mihitsy ireto jiolahy ireto tamin’io fotoana io, raha ny fanazavana voaray hatrany. Nentin-katezerana ny olona ka samy nitsaingoka nidaroka ireto jiolahy tratra ireto. Nisy kosa nanondraka asidra ny lohany ka may ny tarehin’ny iray tamin’ireo olon-dratsy. Tonga ara-potoana ihany ny polisy fa saika matin’ny fitsaram-bahoaka ireto jiolahy ireto.
Maro ireo nitondra faisana tamin’izy ireo…
Mitohy hatrany ny fampandriana fahalemana ny faritra iva indrindra eny amin’ny faritra Isotry, Andranomanalina ary Manarintsoa. Maro ireo olona nitondra faisana tamin’ireto andian-jiolahy ireto, raha ny fijoroana vavolombelona nataon’ny olona mipetraka eny Isotry sy ny manodidina. Manao andiany izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny. Jiolahy efa mpamerin-keloka ny sasany amin’izy ireo satria miverina manohy ny asa ratsiny indray aorian’ny fivoahana ny fonja.
Nanamafy hatrany ny lehiben’ny kaomisarian’Isotry fa fanamby efa napetraky ny polisim-pirenena hatrany ny hampandry fahalemana iny faritra iny. Teo aloha isan’ny faritra mena amin’ny asan-jiolahy rahateo iny faritra iny. Fantatra fa mbola misy naman’ireto jiolahy ireto karohin’ny polisy.